Chikamu: Auto, Moto
Nguva yechando yakanga ichangopera nematambudziko ayo munzira yemagetsi, uye vatyairi vemhepo vaigona kufema, kana imwezve dambudziko risiri rakakura rikangoonekwa. Iyi ipoplar, ...
Mamiriro ezvinhu apo bhatiri rakakundikana rinoziva kune chero muridzi wemota. Sezvo mutemo, izvi zvinoitika panguva isingafadzi uye zvinotyisidzira nematambudziko akakura. Kana mumaguta mamiriro ezvinhu bhatiri rakabviswa ratononoka ...
Kunyange zvingave saizvozvo, mapikicha anonyanya kuitika muUnited States. Uyezve, America inyika yavo. Nhoroondo yemota yakatanga nepfungwa yakajairika. Vagadziri vekambani yeChevrolet (iyo tangi yemuti yakasimudzira ...
"Lada Kalina" ngoro uye hatchback: hunyanzvi mamiriro. "Lada Kalina 2" - motokari yechizvarwa chitsva
Mu2013, AvtoVAZ yakafadza vatyairi nemhando nyowani, mairi inenge hwese tekinoroji hunyanzvi hwakagadziriswa. "Lada Kalina 2" imota-vhiri vhiri mota mota ine yakakwira kutakurwa uye yakaringana hombe mukati.
Saka, imotokari ipi yekutenga ye200000? Muchokwadi, pane kungofungidzira hukuru hukuru sarudzo. Sezvavanotaura - pane chero kuravira uye ruvara. ChiGerman, chiJapanese, chiRussia, America - chero ...
Iyo tepi yekupeta mumota dzeVAZ-2114 ndiyo imwe yeisina kusimba mapepa mugwaro rekutonhora. Iyo inopwanya kazhinji kazhinji kuti varidzi vemota zhinji, vawana ruzivo, pasina matambudziko akazvimiririra vachichinjira ...
Magadzirirwo enjini yemudhudhudhu nedhiziri akagadzirwa munenge panguva imwechete iyoyo. Nekudaro, zvishandiso izvi zvakaenda nenzira dzakasiyana dzekusanduka. Vashoma vaigona kunge vakafungidzira kuti kana izvi zvigadzirwa zvichizoshanda ...
Kambani yeBritish JCB inozivikanwa pasi rese nekuda kwehunhu hwayo hwemhando yepamusoro uye michina yekuvaka yemavhiri. Backhoe mitoro inotora nzvimbo yakakosha mune assortment yekambani. Imwe yemhando dzakakurumbira dzemaitiro aya ...
"Lada 2170" ("Priora"): kududzirwa, kuongororwa
"Lada Priora-2170" - mota, yakatanga kugadzirwa neBSVAZZ mu2007 mune sedan. Gare gare, mu2008, hatchback yakapinda mukugadzirwa kwemazhinji, uye mu2009, ngoro. Zvakakosha kucherechedza kuti ...
KamAZ-65115, hunyanzvi hunhu hwayo hucharatidzirwa pazasi, hwakagadzirwa kubvira 1995 yegore. Rori yakaenda kutengeswa mu1998 .. Iyo iriri seriya yekurasa, kuodha uye kuburitsa izvo zvinoitika kumashure.
Nhasi, kutsanya kwemotokari kunoitwa munzira dzakasiyana siyana. Nekudaro, iyo inonyanya kufarirwa ndeyekuputira mota nevinyl firimu. Izvi zvinyorwa zvinogadzirwa nevazhinji vanogadzira. Rudzi rwakakura kwazvo kuti sarudza iyo chaiyo ...
Iyo Patron Taker 250 mudhudhudhu ine chitarisiko chinonyengera. Kuongorora kunoonekwa kunopa fungidziro yekuti iyi iri tsika yekare yevamwe "maJapan". Asi vese vari nyanzvi uye vanofarira mudhudhudhu vanobva vangoti ...
Injini inoda kufuridzwa here kana ichichinja mafuta? Mumazhinji maforamu emota iwe unogona kuwana kupisa kukurukurirana kwenyaya ino. Vatsigiri venyaya mbiri dzemaonero vane 100% yechokwadi kuti vari kutaura chokwadi, vachitaura mhando dzese dze ...
Lada Granta sedan: yakatarwa uye muridzi wongororo
"Lada Grant" (sedan) izita remari pamberi-vhiri mota mota yakagadziriswa neVolga Automobile Plant. Muenzaniso Lada Kalina wakatorwa senheyo. Mu2011, kugadzirwa kwemazhinji kwakatanga, uye mu ...
Chero mutyairi, uye zvakanyanya zvakanyanya kutanga, anofarira mubvunzo weiyo injini yeinjini yekusarudzira mota yake, kupera kwezuva, kuumbwa uye zvimwe zviratidzo. Ivo vanoti pakupera kwehupenyu hwemafuta, se ...
Panhanho yekutanga yekuve neyako mota, muridzi wacho anotariswa zvakanyanya mumamiriro ezvinhu emota. Nekufamba kwenguva, nzwisiso yezvimwe zvemukati memota yako inouya. Pane mukana wekuti uzviongorore wekuputsika kwemotokari (yakaonekwa ...
Vehicle curb uremu ndiko kutanga huremu hwakaenzana
Mundima dzemotokari uye zvese zvakabatana navo, pane maviri pfungwa dzakadai huremo nekuremerwa uremu hwemotokari. Aya ndiwo maitiro maviri anogara achitaurwa nezvawo mumadigirori ezvidzidzo ...
Kana iyo bhatani rewindo remagetsi rinomira kushanda pamotokari, ipapo kutyaira pamotokari iyi kunogona kushanduka kuva hope dzinotyisa. Iwindo rakavhurika munguva yechando inotonhora kana yakavharwa mukati mekupisa kwezhizha iri pachena ...
Chevrolet Niva, kabhinari ficha: kutsiva. Chevrolet Niva inogadzirwa neGM-AvtoVAZ
Mibvunzo ye321 mu database yakagadzirwa mu 0,901 masekondi.